Intel Daylight Hack ဖြင့်🥇 Cheats, Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
Intel Daylight Hack ကသေပြီ
Dead by Daylight သည်အစဉ်အလာ“ chase” ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်သင်သည်မည်သို့သောဘုရားဖြစ်လာနိုင်သနည်း။
Dead by Daylight ကိုကစားနေစဉ်သင်၏အစစ်အမှန်စွမ်းရည်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ hack များဖြင့်သော့ဖွင့်ပါ။ ယနေ့ ၁ ရက်ကုန်ပစ္စည်းသော့ကိုဝယ်ပါ။
တစ်နေ့တာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူအများစုအတွက်မလုံလောက်ပါ၊ ထို့ကြောင့်ကြာကြာ hack ပါ။ ယနေ့တစ်ပတ်ကုန်ပစ္စည်းသော့ကို ၀ ယ်ပါ။
ဒီနေရာမှာငါတို့မိသားစုကို Gamepron မှာထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ်။ ၁ လကုန်ပစ္စည်းသော့ကိုယနေ့ဝယ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Dead အား Daylight ဖြင့်အသုံးပြုခြင်း Intel Hack သည်ဤဂိမ်းနှင့်ပါ ၀ င်သည့်သင်ကြားရေးဂရပ်ကိုချဉ်းကပ်ရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သင်သည်ဂိမ်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖွင့်လျှင်၊ စိတ်မပူပါနှင့်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Dead ကို Daylight Hoplit Hack ဖြင့်အသုံးပြုခြင်းသည်အောင်မြင်မှုကိုအာမခံပါသည်။
Daylight Intel Hack Information မှသေသည်
Dead by Daylight သည်အလွန်ဖျော့ဖျော့ဖျော့ဖျော့ဖျော့ဖျော့ပုံစံနှင့်တူသည်။ သို့သော်ဒီဂိမ်းကိုရှုံးနိမ့်သူများသည်နာကျင်သောသေဆုံးမှုများကိုခံစားကြရလိမ့်မည်။ တစ်ယောက်ယောက်ကသင့်ကိုအမဲသားချိတ်ပေါ်ဆွဲတင်ပြီးသွေးထွက်စေဖို့မလိုချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Dead by Daylight by ကိုသုံးပြီး Intel hack ကသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအရာဖြစ်လိမ့်မည်။ မည်သည့်နေရာမှတိုက်ခိုက်သည်ကိုသင်သိလိမ့်မည်သာမက၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်များစွာပါ ၀ င်ပြီးသင့်အားအချိန်တိုင်းလိုလိုဘေးကင်းစွာလွတ်မြောက်စေလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးတွင်ယုံကြည်စိတ်ချရသော hack တစ်ခုရှိလာသောကြောင့်ထိတ်လန့်ဂိမ်းပရိသတ်များကဝမ်းမြောက်ကြသည်။
Player နှင့် Item ESP ရွေးစရာများကို အသုံးပြု၍ Killer (သို့မဟုတ် Survivors ကိုဖော်ထုတ်ပါ) နှစ်ခုစလုံးသည်ခိုင်မာသောမျက်နှာပြင်များမှတဆင့်ကစားသမားများနှင့်ပစ္စည်းများ (ထုပ်များ၊ မီးစက်များ) ကိုမြင်တွေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ရန်သူ Info ကသင်၏အကွာအဝေးနှင့်ကျန်းမာရေးဘားများကိုပြောပြလိမ့်မည်၊ DBD Aimbot ကသင့်အားသေစေနိုင်လိမ့်မည်။ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးမှုလည်းရှိပါတယ်!
ရန်သူသတင်းအချက်အလက် (campers, လူသတ်သမားများ)
Daylight Intel မှသေခြင်းအကြောင်း
Stream Mode သည်ထင်ရှားသောအင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သဖြင့်ဤ hack ကိုဖွင့်သောအခါသင်လိုချင်သမျှအားလုံးကို stream လုပ်ပါ။ ဒီ cheat ကိုထိုးရမယ်။ Discord ထပ်လုပ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။ ဒီ tool က Internal ဖြစ်ပြီးသူ့ကိုယ်ပိုင် HWID Spoofer ပါ ၀ င်လာတယ်။ ဒါကြောင့် hardware ID ကိုပိတ်ပင်ထားတဲ့ user တွေကဒီ tool ကိုသုံးပြီးဒီပစ္စည်းကိုသုံးနိုင်တယ်။ ကာကွယ်မှုနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးကိုသင်ပိတ်ထားကြောင်းသေချာပါစေ။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းမရှိဘဲ hack သည်အလံအလံရနိုင်ပြီးစနစ်တကျအလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပါ။ Intel CPUs မှတင်းကြပ်စွာအသုံးပြုရန်တီထွင်ထားသောဤကိရိယာသည်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်လာပြီး Dead by Daylight အားသင့်ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲလိမ့်မည်။
ဘာကြောင့် Dead by Daylight Intel ကိုအခြားပံ့ပိုးသူများထံမှအသုံးပြုရတာလဲ။
အခြားပံ့ပိုးသူများသည် Gamepron ၌တွေ့ရသောအရည်အသွေးကိုမပေးနိုင်ပါ၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများအားလုံးအတွက်မှန်ကန်လိမ့်မည်။ Dead by Daylight Intel hack တွင်ပျမ်းမျှ DBD အသုံးပြုသူမှအကျိုးကျေးဇူးများရသင့်သောအချက်များအားလုံးပါဝင်သည်။ ငါတို့ဖြန့်ချိထားပြီးဖြစ်သော tools များကိုအဆက်မပြတ် update လုပ်နေသည်။ ထို့ကြောင့်မည်မျှသက်တမ်းရှိပါစေကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများသည်လတ်ဆတ်ပြီးသွားရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးစွဲသူများအားလုံးသည် Gamepron tools များကိုအသုံးပြုရန်ကတိပြုထားရသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းသည်အကောင်းဆုံးရလဒ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးသောကြောင့် - ကုန်ပစ္စည်းသော့တစ်ခုဖြင့်သင့်မိသားစု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
ဘယ်တော့မှသင် DBD hack ခြင်းနှင့်အတူပါကစက်ရုံ default settings ကိုအသုံးပြုရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေမည်မဟုတ်ပါ။ နှစ်ပေါင်းများစွာ hack ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေအကြောင်းကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့အားလုံးမှာကိုယ်ပိုင်အကြိုက်များရှိသည်၊ ဆိုလိုတာကကျွန်ုပ်တို့မှာမတူညီသော hack ဆက်တင်များရှိသည်။ အချို့လူများက FOV Circle ကိုပိုကြီးရန်ပိုနှစ်သက်ကြလိမ့်မည်၊ ESPs အနည်းငယ်သာမြင်တွေ့ရလိမ့်မည်၊ အချို့မှာမူကြီးမားသော FOV နှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှ ESPs များများမလိုချင်ကြပါ။ အခြားကုမ္ပဏီများကသူတို့၏ DBD cheat အကြောင်းပြောဆိုနေကြသော်လည်း Gamepron သည် DBD hack များကိုတစ်ခုတည်းသောပံ့ပိုးပေးသူဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာကြီးသည် Gamepron ဖြင့်သင်၏ကမာဖြစ်သည်!
ဒီ cheat ကိုမဖွင့်ခင်သင်ဘယ်လိုကစားသလဲဆိုတာကိုသတိပြုပါ။ ပြီးတော့ဘယ်လောက်အသုံးဝင်လဲဆိုတာသင်တွေ့လိမ့်မယ်။ သင်၏ရည်မှန်းချက်သည်အမြဲတမ်းတည်ရှိနေမည်ဖြစ်ပြီးရန်သူများသည်သင်၏မြင်နေရသည့်မျက်လုံးမှဝှက်။ မရနိုင်ပါ။
အဆင်သင့် စိုးမိုး Day ကို Intel Hack ခြင်းဖြင့်ငါတို့သေဆုံးမှုနှင့်အတူ?